IJamaica Blitz kwiiMarike zeHlabathi: Uhlaziyo olusemthethweni nguMphathiswa wezoKhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » IJamaica Blitz kwiiMarike zeHlabathi: Uhlaziyo olusemthethweni nguMphathiswa wezoKhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Ukubambisa • Culinary • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
UMphathiswa wezoKhenketho waseJamaica, oHloniphekileyo. Edmund Bartlett, uthe thaca uhlaziyo lwecandelo lezokhenketho ePalamente. Oku kulandelayo ngamagqabaza akhe.
Ishishini lezokhenketho laseJamaica likhula ngokuthe ngcembe ngendlela enkulu kwaye imfuno yemveliso yethu ecingisiswe ngokutsha ikwinqanaba eliphezulu.
Akukho ndawo icace ngakumbi le ngaphandle kokuphumelela kwethu iiveki ezintlanu zeemarike eziye zasisusa eUnited States naseKhanada ukuya kuMbindi Mpuma naseUnited Kingdom.
Intsabelo yayingaqhelekanga ngokwenene.
Sele kubonakala kumanani ukuba indlela yethu entsha yonikezelo lokhenketho, ezelwe ngenxa yoqwalaselo lobhubhane we-COVID-19, iyahlawula. Amanani ethu okufika ayenyuka, ukuhamba ngenqwelomoya ngexesha lasebusika kujongeka kakuhle, kwaye ukuhamba ngenqanawa kuya kubuya kuwo onke amazibuko ethu ngaphambi kokuphela konyaka.
Ukufika kweStopover kulo nyaka ukuza kuthi ga ngoku kume kwi-1.2 yesigidi, kwaye okoko ukuhanjiswa ngenqanawa kuqale kwakhona ngo-Agasti, samkele abakhweli abahamba ngenqanawa abangaphezu kwama-36,000, ngelixa imivuzo yethu ngoku ikwi-US$1.5 yebhiliyoni.
Jameyikha ihamba kakuhle kwiindlela zayo zokuchacha. Ukufika kokufika kuka-2021 kuqikelelwa ukuba kunyuke nge-41% unyaka nonyaka, kwaye unyaka ukuza kuthi ga ngoku sibuyise phantse isiqingatha seshishini lokumisa lika-2019.
Iindaba ezimnandi zezokuba uDisemba udla ngokuba yinyanga eyomeleleyo kuthi, kwaye iqala ixesha lonyaka eliphezulu xa amaxabiso ephezulu, ngoko ke siya kudibana noqikelelo lwethu lweendwendwe ezizizigidi ezisisi-1.6 kunye nengeniso engaphezulu kwe-2 yeebhiliyoni zeedola zaseMelika.
Ekupheleni kuka-2022, amanani abakhenkethi baseJamaica kulindeleke ukuba abe zizigidi ezi-3.2, abakhweli abahamba ngenqanawa babalelwa kwi-1.1 yezigidi kunye nabafikayo abafikayo babalelwa kwi-2.1 yezigidi, ngelixa umvuzo uqikelelwa kwi-US $ 3.3 yezigidigidi.
Ekupheleni kuka-2023, amanani abakhenkethi baseJamaica kulindeleke ukuba abe yi-4.1 yezigidi, abakhweli abahamba ngenqanawa babalelwa kwi-1.6 yezigidi kunye nabafikayo abafika kwi-2.5 yezigidi kunye nemivuzo kwi-US $ 4.2 yezigidigidi.
Ekupheleni kuka-2024, kuqikelelwa ukuba siya kugqithisa amanani ethu angaphambi kobhubhane ngokufika kweendwendwe zizonke ezizigidi ezi-4.5 kunye nengeniso yotshintshiselwano lwangaphandle oluqikelelwa kwi-4.7 yeebhiliyoni zeedola zaseMelika.
Ezinye iindaba ezilungileyo zeshishini ezifanekisela oku kuphinda kubuyiswe kukhenketho:
I-90% yeeprojekthi zotyalo-mali zangaphambi kobhubhane zisasebenza.
Ngaphezulu kweshumi elinesibini iiprojekthi zophuhliso lweehotele eziqhubekayo.
5,000 amagumbi ongezelelweyo.
Uphuhliso luyaqhubeka kwiindawo ezahlukeneyo zesiqithi.
Ukubuyiswa kwemisebenzi yokuhamba ngenqanawa kuwo onke amazibuko esiqithi ekuqaleni kukaDisemba
Ukuchukumisa ngokufutshane kwinqanawa yokuhamba ngenqanawa, kulandela ikhefu elikufutshane leenyanga ezingama-20, uFalmouth wamkele inqanawa yakhe yokuqala yokuhamba ngeCawe-Carnival Corporation's Emerald Princess, enabakhweli abangama-2,780 kunye nabasebenzi.
I-Celebrity Equinox, u-Aida Diva kunye ne-Crystal Serenity kulindeleke ukuba babuyele e-Falmouth kamva kule nyanga. Inqanawa yeflegi yeDisney Cruise Lines iDisney Fantasy icwangciselwe ukutyelela ngoDisemba.
Ukufika kweNkosazana ye-Emerald kunikeze ithuba lokusungulwa okuthambileyo kweLali ye-Artisan eHampden Wharf kunye namagcisa ali-10. Yamkelwa kakuhle kakhulu ngabakhenkethi abahamba ngenqanawa. I-700 yezigidi zeerandi ze-Tourism Enhancement Fund (TEF)-ilali exhaswa ngemali inomxholo wokuxelela ibali le-Falmouth kwaye inika abantu baseJamaica kunye neendwendwe ithuba lokwabelana ngokutya kwendawo, isiselo, ubugcisa, ubugcisa kunye nenkcubeko.
Iyinxalenye yeprojekthi ebanzi yoPhuhliso lwe-Hampden Wharf kwaye iya kuba yeyokuqala kuthotho lweeLali zamaGcisa eziya kuba kwindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kwisiqithi sonke.
Iziphumo eziyimpumelelo ze-blitz yethu yeemarike zamazwe ngamazwe ngokuqinisekileyo ziya kusinceda ukuba sifezekise olu sukelo ukuba asilugqibi.
Ndiyakholwa le nto ukubuyisela okuhle kunye nokunyuka kwemfuno yeBrand Jamaica ubukhulu becala kungenxa yeenzame zethu eziyimpumelelo zokubuyisela intembeko yabahambi kwiNdawo yokuFikela eJamaica.
Iiprothokholi zethu zempilo nokhuseleko, IiCorridors eziZimeleyo, iJamaica Cares, kunye nezinga eliphezulu lokugonywa (ezinye ngama-60%) phakathi kwabasebenzi bethu bokhenketho liqinisekisa abatyeleli bethu ngamava eholide akhuselekileyo, akhuselekileyo nangenamthungo.
Ndingathanda ukwabelana ngezinye zeziphumo eziphambili zohambo lwam lwakutsha nje, kunye namanye amagosa aphezulu kwezokhenketho, kwiimarike zethu ezingundoqo kunye nokungena kwethu kwiimarike ezingezizo ezemveli zoMbindi Mpuma, apho besizama ukunyusa izinga lokufika kunye nokungena. ukukhuthaza utyalo-mali olongezelelweyo kwicandelo lezokhenketho.
I-United States kunye ne-Canada Markets Blitz
Siqalise i-blitz ngothotho lweentlanganiso kunye neenkokheli zeshishini lokuhamba, amajelo eendaba kunye nabanye abachaphazelekayo kwiimarike zethu ezimbini ezinkulu, i-United States neCanada. Ndiyavuya ukwabelana ngokuba uthethathethwano lwethu namaqabane aphambili kwezokhenketho kuzo zombini iimarike lube neziqhamo ezihle.
Bekukho iinkxalabo ezinxulumene ne-COVID-19 kwaye besifuna ukuqinisekisa umdla wokhenketho ukuba iJamaica ihlala iyindawo ekhuselekileyo.
Iiprothokholi zethu zikwindawo yokuqinisekisa ukuba abakhenkethi banokuza esiqithini, baye kwiindawo zethu ezinomtsalane kwaye babe namava okwenyani eJamaican ngokukhuselekileyo nangokungenamthungo. Nangona ezi nkxalabo, nangona kunjalo, ukuzithemba eJamaica kuhlala kunamandla kakhulu.
Abaphathi beyona nkampani yeenqwelo moya inkulu kwihlabathi, iAmerican Airlines, isiqinisekisile ukuba isiqithi sizakubona ngeyoMnga iinqwelomoya ezingamisiyo ezili-17 ngosuku, njengoko imfuno yendawo yokufikela ikhula.
Baphinde bachaza ukuba iJamaica igqwesile kwiiCaribbean phakathi kwabathengi kwiqonga labo leeholide zeAmerican Airlines kwaye baqinisekisa ukuba baya kusebenzisa iinqwelomoya zabo ezintsha, ezinkulu, ezinomzimba obanzi iBoeing 787, kwiindlela ezininzi eziphambili eziya eJamaica ukuqala ngoNovemba.
I-Southwest Airlines, enye yezona nqwelomoya zinkulu e-United States kunye neyona nqwelo moya inexabiso eliphantsi emhlabeni, iqinisekise abathunywa bethu ukuba ukusebenza kwabo ngenqwelomoya ukuya eMontego Bay kwiinyanga ezizayo kusondele kakhulu kumanqanaba erekhodi yobhubhane ka-2019, ebonisa ukwanda kwemfuno. indawo yokuya eJamaica ngabahambi base-US.
UMzantsi-ntshona usebenza iinqwelomoya ezingapheliyo phakathi kwezikhululo zeenqwelomoya ezinkulu zase-US zase-Houston (I-Hobby), i-Fort Lauderdale, i-Baltimore, i-Washington, i-Orlando, i-Chicago (eMidway), i-St. Louis ne-Montego Bay.
I-Expedia Inc., i-arhente enkulu yokuhamba nge-intanethi kwihlabathi kunye nomvelisi omkhulu weshishini lokhenketho eJamaica, bathi idatha yabo ibonisa ngokucacileyo ubusuku obumangalisayo begumbi kunye nokukhula kwabakhweli kunye neemetrics zombini ezidlula ngexesha elifanayo kwi-2019. Baye baqaphela ukuba i-US ihlala iyonke yokukhangela imvelaphi yemarike yeJamaica.
Imarike yethu yomthombo wesibini ngobukhulu, eCanada, iya kuzisa iinqwelomoya ezingama-50 ezingamisiyo ngeveki ukuya esiqithini. Iinqwelomoya, eziqale ngoNovemba 1, ziya kuqhutywa yi-Air Canada, i-WestJet, i-Sunwing, i-Swoop kunye ne-Transat kunye neenkonzo ezithe ngqo ezivela kwizixeko zaseCanada zaseToronto, eMontreal, eCalgary, eWinnipeg, eHamilton, eHalifax, e-Edmonton, eSt. kunye neMonton.
Ubhukisho oluya phambili lujikeleza malunga ne-65% yamanqanaba ka-2019 kwaye ukuhamba ngenqwelomoya eBusika kukwinqanaba elimalunga nama-82% ka-2019 kunye nezihlalo ezimalunga nama-260,000 zitshixelwe ngaphakathi. kangangeenyanga ezininzi lwavala uhambo lwamazwe ngamazwe.
Ngelixa iRoyal Caribbean International, inqanawa yesibini ngobukhulu emhlabeni, iphinde yaqala ukusebenza eJamaica ngoNovemba walo nyaka. Kananjalo, abaphathi bezokhenketho baphinde bawuphinda umnqweno onamandla wokuqesha amawakawaka abantu baseJamaica kuluhlu olubanzi lwemisebenzi kwaye balindele uhlengahlengiso kulawulo lukarhulumente ukuze lube yinyani.
I-Blitz yeMarike yoMbindi Mpuma
Utyalo-mali luza kudlala indima ebalulekileyo ekubuyiseni kwakhona ukhenketho ngokubonelela ngemali efunekayo yokwakha nokuphucula iiprojekthi eziyimfuneko kuphuhliso nokukhula kwamandla okhenketho.
Utyelelo lwethu kuMbindi Mpuma lusivumele ukuba sihlole amathuba e-FDI kwicandelo lethu lezokhenketho kunye nokwakha kwiingxoxo ezaqalwa ngoJuni noMphathiswa wezoKhenketho eSaudi Arabia, oBekekileyo u-Ahmed Al Khateeb, ezijolise ekuququzeleleni intsebenziswano notyalo-mali kwezokhenketho kunye no. ezinye iindawo eziphambili.
Indawo yethu yokuqala yokumisa yayikwi-United Arab Emirates (UAE) kuMboniso weHlabathi waseDubai ka-2020. I-Jamaica ibikumboniso ngepaviliyoni entle ebonisa iindawo ekusingwa kuzo iimveliso zamva nje kunye nezinto ezintsha phantsi komxholo othi: “Jamaica Makes It Move.” Ipavilion ineezowuni ezisixhenxe, ezivumela abatyeleli ukuba babe namava okubukela, izandi kunye neencasa zaseJamaica, kwaye babone indlela ilizwe lethu elilihambisa ngayo ihlabathi kwaye lisebenza njengonxibelelwano lolungiselelo.
Ndinebhongo ukwabelana ngokuba indawo yethu yokubukela iye yabizwa ngokuba yeyona 'ipholileyo' kwi-World Expo 2020 licandelo le-ITP Media Group, iTime Out Dubai.
Uhambo lwase-Dubai lusinike ithuba lokulandelela iingxoxo kunye nabaphathi abavela kwi-TUI, omnye wabaqhubi bethu abakhulu kunye namaqabane kwicandelo lokusasazwa kweshishini lokhenketho.
I-TUI iqinisekisile ukuqaliswa kwakhona kweenqwelo-moya kunye nokuhamba ngenqanawa ukuya eJamaica, kunye nemisebenzi yokuhamba ngenqanawa ecwangciselwe ukuqala ngoJanuwari 2022. Inkampani yachaza ngokukodwa izicwangciso zokuthunyelwa ekhaya e-Montego Bay kunye nokufakwa kweefowuni eziya ePort Royal kwishedyuli yabo yokuhamba ngenqanawa. Silindele ukuba neminxeba emihlanu ukusuka ngoJanuwari ukuya ku-Epreli 2022 ePort Royal. Ngexesha leengxoxo kunye neTUI, abaphathi benkampani bacebise ukuba idatha yabo ibonisa ukuba imfuno yokuhamba ngenqanawa iphezulu, kwaye baye bakwazi ukugcina ukubhukisha okucinyiweyo. Baye babelana nokuba umthamo womoya ngeli xesha lobusika uya kuba ngama-79,000, nto leyo engaphantsi nge-9% kuphela kunamanani asebusika angaphambi kwe-COVID.
Ngelixa sise-Dubai, saqukumbela uthotho lweentlanganiso ezibalulekileyo zotyalo-mali ngenqanawa kunye ne-DP World, enye yezona nkampani zinkulu kwihlabathi kunye nezothutho lwaselwandle, ezinze e-UAE. Ngeentsuku ezintathu ezilandelelanayo zeentlanganiso, siye saba neengxoxo ezinzulu malunga notyalo-mali kwiPort Royal Cruise Port kunye nokuba nokwenzeka kokuthunyelwa ekhaya. Siphinde saxoxa ngophuhliso lwe-hub yezothutho, i-Vernamfield yeendlela ezininzi zothutho kunye ne-aerotropolis kunye nolunye utyalo-mali lweziseko ezingundoqo.
I-DP World igxile ekuthuthweni kwempahla, iinkonzo zaselwandle, imisebenzi yamazibuko kunye nemimandla yorhwebo lwasimahla. Iphatha malunga ne-70 yezigidi zeekhonteyina eziziswa malunga ne-70,000 yeenqanawa ngonyaka, nto leyo ilingana ne-10% ye-container ye-worldcontainer traffic ebalwa ngamatheminali azo angama-82 aselwandle nangaphakathi akhoyo kumazwe angaphezu kwama-40.
Saqalisa iingxoxo kunye nabameli abaphezulu be-Emirates Airlines, ukwazisa inkonzo ekhethekileyo phakathi kwe-Dubai ne-Jamaica, ekubhiyozeleni uSuku lweJamaica kwi-Expo 2020, e-Dubai ngoFebruwari 2022. I-Emirates yeyona moya inkulu kwi-UAE, kunye noMbindi Mpuma jikelele, esebenza phezu 3,600 iinqwelomoya ngeveki.
Ukongeza, silindele iingxoxo ezongezelelekileyo kumxholo wezicwangciso zokusingwa ezininzi eziqulunqwayo kumantla eCaribbean ukuze kubekho uthethathethwano olupheleleyo lwe-Emirates kunye namanye amaqabane kuMbindi Mpuma.
Sikwadibene neGunyabantu lezoKhenketho le-UAE ukuxoxa ngentsebenziswano kutyalo-mali lokhenketho olusuka kummandla, amalinge okhenketho kuMbindi Mpuma, kunye nokufikelela kwisango lokuya eMntla Afrika nase-Asiya kunye nokuququzelela ukuhamba ngenqwelomoya.
Ukongeza, iintlanganiso ziqhubekile nabaphathi be-EMAAR, ngokungathandabuzekiyo eyona ndawo inkulu kunye neyona ndawo ihloniphekileyo yokwamkela iindwendwe kunye ne-Real Estate/umphuhlisi woLuntu kuMbindi Mpuma; I-DNATA, umqhubi omnye omkhulu wokhenketho kwi-UAE kunye ne-TRACT, umkhenkethi onamandla eIndiya.
Uhambo lwethu oluya e-UAE lwaphela ngenqaku eliphezulu. Kulo nyaka umboniso wamaBhaso oKhenketho eHlabathi abalaseleyo ububanjelwe eDubai, kwaye iJamaica iqhubekile nolawulo lwayo ijongana “neNdawo yokuFikela eKhokela kwiCaribbean” kunye 'neNdawo yokuSikela eNkolweni yeCaribbean,' ngelixa iBhodi yabaKhenkethi yaseJamaica yathiywa 'Ibhodi yabakhenkethi eKhokela kwiCaribbean.'
Siphinde saphumelela kwiindidi ezimbini ezintsha: 'INdawo yoKhenketho ePhakamileyo yeCaribbean' kunye ne'Caribbean's Leading Nature Destination.' Abadlali abaliqela kushishino lwezokhenketho lwasekhaya nabo bavele njengabaphumeleleyo abakhulu.
Ukusuka kwi-UAE, saya eRiyadh, eSaudi Arabia, apho sasiba neengxoxo kunye nabaphathi abavela eSaudia Airlines. Ndiyavuya ukwabelana ngeso sicwangciso sikuloliwe ukukhulisa unxibelelwano lomoya phakathi koMbindi Mpuma kunye neCaribbean.
Isicwangciso esibanzi kukuba iJamaica ibe liziko loqhagamshelo ukusuka kuMbindi Mpuma ukuya kutsho kwiCaribbean, kuMbindi Merika, eMzantsi Melika nakwiindawo zoMntla Merika. Oku kuya kubeka iJamaica njengendawo esembindini woqhagamshelo lomoya phakathi kweMpuma neNtshona.
Siqinisekile ukuba siya kubona iziphumo eziphuma kule ngokufutshane njengoko zombini iinqwelomoya esizithethileyo zibonise umnqweno onamandla weCaribbean kwaye, ngakumbi, iLatin America.
Umjikelo wemisebenzi yokuthengisa kunye nabalingane abaphambili bokhenketho kunye nempahla kuMbindi Mpuma waba neziqhamo kakhulu kwaye ngokungathandabuzekiyo uya kuba nesiphumo sokuqinisekisa utyalo-mali olutsha kunye neemarike kunye nokuvula amasango amakhulu.
I-Blitz yeMarike yase-UK
Ukungena kwethu kwimakethi yethu yesithathu ngobukhulu, e-United Kingdom (e-UK), ukuxhasa abafikayo kungqineke kunemveliso ngokulinganayo kwaye kwaqukumbela ukuqhambuka kweemarike zethu zehlabathi.
Ndikhokele iqela elikwinqanaba eliphezulu elisuka kwiSebe lezoKhenketho kunye neJamaica Tourist Board (JTB) ukuya kwiWorld Travel Market, enye yemiboniso emikhulu yorhwebo lokhenketho ehlabathini lonke, eyayibanjelwe eLondon ukusuka ngomhla woku-1 ukuya kowesi-3 kweyeNkanga.
Siye saba nothethathethwano oluhle kakhulu kunye namaqabane ethu aphambili e-UK kwaye sabaqinisekisa ngokulungela kwabo iJamaica kunye nokhuseleko lwethu njengendawo yokusingwa, ngesantya esingaphantsi kwepesenti enye yosulelo lwe-COVID-19 kwiiCorridors eziQinisekisayo.
Ngelixa kwiMarike yokuHamba yeHlabathi, sadibana nabaphathi abaphezulu be-Amadeus, inkampani yetekhnoloji yezohambo yaseYurophu esekwe kwihlabathi jikelele, owasazisa ukuba ukukhutshwa kwe-30 kaSeptemba ye-movie yamva nje kaJames Bond, Akukho Ixesha lokufa, enemiboniso emininzi IJamaica, inceda ekuqhubeni umdla kwindawo ekuyiwa kuyo iJamaica, ngakumbi eUnited Kingdom.
IJamaica likhaya lomoya likaBond, u-Ian Fleming ebhala iinoveli zikaBond endlwini yakhe, “Goldeneye.” Iifilimu zeBond uGqr No kunye noLive kunye noLet Die nazo zafotwa apha. Akukho xesha lokufa, abenzi bhanyabhanya bakha indlu kaBond eselunxwemeni eseSan San Beach ePort Antonio.
Eminye imiboniso efotwe eJamaica ibandakanya ukuhlangana kwakhe nomhlobo wakhe uFelix kunye nokudibana no-007 omtsha, uNomi. IJamaica iphinda kabini kwimiboniso yangaphandle yaseCuba.
Ukongeza, abaphathi be-Amadeus baqaphele ukuba babona ukhangelo oluphezulu kunye nomdla wobhukisho kunye nemfuno yendawo yokuya eJamaica e-United Kingdom kwaye bayichaze ngomsebenzi weSebe lezoKhenketho kunye nequmrhu labo likarhulumente iJamaica Tourist Board (JTB) ngesitshixo. amaqabane kwindawo yentengiso.
Ekupheleni kwale nyanga siza kuqala ukufumana ubuncinane iinqwelomoya ezili-17 ngeveki ezisuka e-United Kingdom, sibuyisela isiqithi kwindawo emalunga ne-100 yeepesenti yomthamo wezihlalo zenqwelomoya njengoko amanani ethu okhenketho ephinda ebuya.
I-TUI, iBritish Airways kunye neVirgin Atlantic ziinqwelomoya ezintathu ezithwele abakhweli phakathi kwe-UK kunye neJamaica kunye neTUI esebenza iinqwelomoya ezintandathu ngeveki, iVirgin Atlantic yonyuka ukuya kwiinqwelomoya ezintlanu ngeveki kunye neBritish Airways ukusebenza ezintlanu ngeveki. Iinqwelomoya ziphuma eLondon Heathrow, eLondon Gatwick, eManchester naseBirmingham. Ngaphaya koko, sinokubona utshintsho olungakumbi kwishedyuli njengoko amaqela ethu eqhubeka neengxoxo nabachaphazelekayo bethu.
Kwiindaba eziphuma kwiimarike zethu zaseYurophu, i-European point-to-point carrier, i-Eurowings, yenza inqwelomoya yayo yokuqala ukusuka eFrankfurt, eJamani, ukuya eMontego Bay ngoNovemba 4, kunye nabagibeli be-211 kunye nabasebenzi.
IJamani ibiyimarike eyomeleleyo kuthi, ngeendwendwe ezingama-23,000 ezisuka kweli lizwe eziza kunxweme lwethu ngo-2019 ngaphambi kobhubhane. Le nqwelomoya isuka eJamani iya kunceda kuthumo lwethu lokunyusa abatyeleli abafikayo abasuka eYurophu, apho iqela lam belisoloko lizibandakanya nalo.
Inkonzo entsha iya kubhabha kabini ngeveki ukuya eMontego Bay, induluka ngooLwezithathu neMigqibelo, kwaye yandise ukufikelela kwisiqithi ukusuka eYurophu. Ukongeza, i-Swiss leisure airline, i-Edelweiss, iqalise iinqwelomoya ezintsha kanye ngeveki ukuya eJamaica ngelixa iCondor Airlines iphinde yaqala malunga neenqwelomoya kabini ngeveki phakathi kweFrankfurt, eJamani, naseMontego Bay ngoJulayi.
Akungabazeki ukuba ukhenketho luyintliziyo yoqoqosho lwaseJamaican kunye ne-catalyst eya kusenza ukuba sibuyele ngokukhawuleza. Ezi nzuzo zibonakalayo sizenzayo kukhenketho ngokuqinisekileyo ziya kuphinda zibe luncedo kubo bonke abachaphazelekayo - abantu baseJamaica, amaqabane ethu okhenketho kunye neendwendwe zethu.